दही खान नजान्दा बिष पनि बन्न सक्छ ! दही कहिले, किन र कसरी खाने ? – Bisal Chautari
दही खान नजान्दा बिष पनि बन्न सक्छ ! दही कहिले, किन र कसरी खाने ?
- २६ माघ २०७४, शुक्रबार ०९:३३ मा प्रकाशित
When and how to eat curd?
काठमाडौँ, २०७४ माघ २६ शुक्रबार। दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ । तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँदा यो विषाक्त बन्न पुग्छ ।